Kooxda Dekedda oo maanta ka duushay garoonka diyaarahada Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho… + SAWIRRO – Gool FM
(Muqdisho) 07 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta Dekedda ayaa maanta ka amba-baxday garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, iyagoo ku sii jeeda dalka Masar.
Kooxda Dekedda ayaa ka qeyb galeysa tartanka lagu magacaabo Caf Champions League 2019, kaas oo ay ka qeyb galaan kooxaha ku soo guuleysta horyaallada dalkooda.
Dekedda waxay la dheeli doonta mid ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan dalka Masar taas oo lagu magacaabo Al Zamalek, waxaana u ciyaara xiddigo qeyb ka ah safka xulka Masar, sidoo kale waxay kooxdaas shan jeer ku guuleysatay koobkan ee Caf Champions League.
Naadiga uu horkacayo Macallin Yuu Cali ayaa saddexdii sano ee la soo dhaafay ku guuleysanaysay tartanka horyaalka Somali Premier League.
Muddo laga joogo 35-sano ayaa ugu dambeysay koox ka socoto Soomaaliya inay ka qeyb-gasho tartankan, balse sanadkan waxaa u suurta gashay kooxda Dekedda inay ka qeyb galaan tartanka Caf Champions League 2019.
Wiilasha Dekedda ayaa maalmihii ugu dambeyay waxay samaynayeen tababar adag oo ay iskugu diyaarinayaan tartanka Caf Champions League.
Si kastaba ha haatee, Kooxda Dekedda ayaa horey u wadatay qaar kamid ah xiddigo ka tirsan kooxaha dalka, waxaana ka mid ah goolhayaha kooxda Heegan Mustaf Nakuja kaas oo safarka Dekedda u sii raacay.
Todobo xiddig oo ka mid ahaa xulka qarankan Soomaaliya kuwaas oo dhowaan ka qeyb galay tartanka Chan Cup ayaa sidoo kale qeyb ka ah safarka kooxdooda Dekedda ay ku aadeyso dalka Masar.
RASMI: Kooxda Manchester United oo shaacisay lambarka uu u xiran doono daafaceeda cusub ee Harry Maguire